Mahita Kalesy Afo toa An’i Elisa ve Ianao? | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Myama Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Twi Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nikaroka an’i Elisa mpaminany ny mpanjakan’i Syria, ary fantany fa tao Dotana izy. Tanàna mimanda eo an-tampon-kavoana izy io. Nandefa soavaly sy kalesin’ady ary tafika nankany àry ilay mpanjaka ny alin’iny, ka efa voahodidina ilay tanàna raha vao nangiran-dratsy.—2 Mpanj. 6:13, 14.
Hitan’ny mpanompon’i Elisa ireo miaramila nikasa hisambotra an’ilay mpaminany, rehefa nifoha izy ka nankeo ivelany. Hoy izy: “Indrisy, tompoko ô! Inona no hataontsika?” Hoy i Elisa: “Aza matahotra, fa ny momba antsika dia betsaka noho ny momba azy.” Nivavaka izy avy eo hoe: “Jehovah ô, ampahirato re ny masony mba hahitany e!” Inona no nitranga? “Avy hatrany dia nampahiratin’i Jehovah ny mason’ilay mpanompo, ka nahita izy. Ary indreo feno soavaly sy kalesy afo ny faritra be tendrombohitra manodidina an’i Elisa.” (2 Mpanj. 6:15-17) Inona no ianarantsika avy amin’izany sy ny zava-nitranga hafa teo amin’ny fiainan’i Elisa?
Tony i Elisa rehefa voahodidin’ny Syrianina, satria natoky an’i Jehovah izy sady nahita fa nampiasa ny heriny hiarovana azy Andriamanitra. Tsy manantena fahagagana isika ankehitriny, nefa takatsika fa miaro ny vahoakany amin’ny fitambarany i Jehovah. Toy ny hoe voahodidina soavaly sy kalesy afo isika. Raha mino an’izany isika sady miantehitra foana amin’Andriamanitra, dia “tsy hanana ahiahy” sy hotahin’i Jehovah. (Sal. 4:8) Andeha isika handinika zava-nitranga hafa teo amin’ny fiainan’i Elisa ka handray lesona avy amin’izany.
NANOMBOKA NANOMPO AN’I ELIA I ELISA
Indray mandeha, raha mbola niasa tany i Elisa, dia nanatona azy i Elia. Natsipiny teny amin’i Elisa ny akanjon’ny mpaminany nanaovany, ka fantatr’i Elisa fa tian’i Elia hanampy azy izy. Nanao fanasam-be àry i Elisa, nanao veloma ny ray aman-dreniny, ary lasa nanompo an’i Elia. (1 Mpanj. 19:16, 19-21) Vonona ny hanompo an’Andriamanitra araka izay fara heriny i Elisa, ka nampiasain’i Jehovah araka izay tiany, ary lasa mpaminany nandimby an’i Elia, tatỳ aoriana.
Nanompo an’i Elia nandritra ny enin-taona angamba i Elisa. “Mpanondraka rano ny tanan’i Elia” izy. (2 Mpanj. 3:11) Nihinan-kanina tamin’ny tanana ny olona tamin’izany, fa tsy nampiasa sotro na antsy na fitaovana hafa. Nanondraka rano ny tanan’ny tompony ny mpanompo taorian’ny sakafo, mba hanadiovana azy. Mety ho noheverina ho ambany àry ny asa sasany nataon’i Elisa. Noheveriny ho tombontsoa anefa ny nanompo an’i Elia.
Kristianina maro ankehitriny no manao fanompoana manontolo andro isan-karazany. Nahoana? Satria mino an’i Jehovah izy ireo ary te hanao izay fara heriny hanompoana azy. Mandao ny fianakaviany, ohatra, ny sasany mba hanompo any amin’ny Betela, na hanao fanorenana. Mety hoheverin’ny olona maro fa asa ambany ny asa ataon’ireny rahalahy sy anabavy ireny. Tsy tokony hihevitra an’ireny fanompoana ireny ho ambany na tsy misy dikany anefa isika, satria tena sarobidy amin’i Jehovah izy ireny.—Heb. 6:10.
TSY NIALA TAMIN’NY ASA NANENDRENA AZY I ELISA
Nirahin’Andriamanitra nankany Betela i Elia, talohan’ny ‘nitondrany azy hiakatra ho any amin’ny lanitra tao anaty tafio-drivotra.’ Nanakana an’i Elisa tsy hiaraka taminy i Elia, nefa hoy i Elisa: “Tsy handao anao aho.” Indroa i Elisa no nasain’i Elia nijanona rehefa teny an-dalana, fa tsy nanaiky. (2 Mpanj. 2:1-6) Tsy nety nisaraka tamin’i Elia izy, toa an’i Rota izay tsy nety nisaraka tamin’i Naomy. (Rota 1:8, 16, 17) Nahoana? Azo antoka fa nankasitraka ny tombontsoa nomen’Andriamanitra azy izy, dia ny hanompo an’i Elia.
Modely ho antsika i Elisa. Ho tena sarobidy amintsika izay asa rehetra anendrena antsika eo anivon’ny fandaminana, raha mitadidy isika hoe fanompoana an’i Jehovah izany. Tsy misy voninahitra lehibe noho ny manompo azy!—Sal. 65:4; 84:10.
“ANGATAHO IZAY TOKONY HATAOKO HO ANAO”
Nilaza toy izao tamin’i Elisa i Elia, teny an-dalana: “Angataho izay tokony hataoko ho anao, alohan’ny hakana ahy hiala aminao.” Zavatra hanampy azy hanatsara ny fanompoany an’i Jehovah no nangatahin’i Elisa, toy ny nangatahin’i Solomona. Te “hahazo anjaran’olon-droa amin’ny fanahy miasa” amin’i Elia izy. (1 Mpanj. 3:5, 9; 2 Mpanj. 2:9) Teo amin’ny Israely, dia nahazo anjaran’olon-droa ny zanaka lahimatoa, rehefa nomena lova. (Deot. 21:15-17) Toy ny hoe nangataka handova an’i Elia àry i Elisa, izany hoe te ho mpaminany handimby azy. Te hahazo ny “fanahy” na ny toe-tsain’i Elia koa izy. Be herim-po mantsy i Elia, ary “tena nafana fo tamin’ny fanompoana an’i Jehovah.”—1 Mpanj. 19:13, 14.
Ahoana no navalin’i Elia an’i Elisa? Hoy izy: “Sarotra izany zavatra angatahinao izany. Raha hitanao ny hakana ahy hiala aminao, dia ho azonao izany. Fa raha tsy izany kosa, dia tsy ho azonao izany.” (2 Mpanj. 2:10) Te hilaza zavatra roa i Elia. Voalohany, Andriamanitra ihany no afaka manapa-kevitra raha hahazo an’izay nangatahiny i Elisa na tsia. Faharoa, tsy maintsy tapa-kevitra ny hiaraka amin’i Elia foana i Elisa, na inona na inona mitranga, raha tiany ny hahazo izay nangatahiny.
INONA NO HITAN’I ELISA?
Neken’Andriamanitra ve ny fangatahan’i Elisa? Izany tokoa! Hoy ny Baiboly: “Raha mbola nandeha izy ireo, sady niresaka teny am-pandehanana, dia nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy. Ary niakatra ho any amin’ny lanitra tao anaty tafio-drivotra i Elia. Nahita izany rehetra izany i Elisa.” * Nahita ny nakana an’i Elia hiala taminy àry i Elisa, ka nahazo anjaran’olon-droa tamin’ny fanahy niasa tamin’i Elia ary lasa mpaminany nandimby an’i Elia.—2 Mpanj. 2:11-14.
Noraisin’i Elisa ilay akanjona mpaminany, izay latsaka avy teny amin’i Elia, ka nanaovany. Iny akanjo iny no nahafantarana fa lasa mpaminanin’Andriamanitra izy. Nisy porofo hafa koa tatỳ aoriana. Nanao fahagagana izy ka nampisaraka ny Reniranon’i Jordana.
Nisy vokany lalina teo amin’i Elisa ny zavatra hitany rehefa niakatra tao anaty tafio-drivotra i Elia. Tsy fahita firy mantsy izany kalesy afo sy soavaly afo izany! Voaporofo fa neken’i Jehovah ny fangatahan’i Elisa. Marina fa tsy mahita kalesy afo sy soavaly afo isika, rehefa mamaly ny vavaka ataontsika i Jehovah. Mahita porofo mazava anefa isika hoe mampiasa hery lehibe izy mba hanampiana antsika sy hanatanterahana ny sitrapony. Rehefa hitantsika koa hoe tahin’i Jehovah ny ampahany eto an-tany amin’ny fandaminany, dia toy ny hoe hitantsika mandroso ny kalesiny any an-danitra.—Ezek. 10:9-13.
Maro ny zavatra niainan’i Elisa, ka nahitany hoe manana hery lehibe i Jehovah. Nahavita fahagagana 16 izy noho ny fanampian’ny fanahy masina. Avo roa heny noho ny fahagagana vitan’i Elia izany. * Nahita ny herin’i Jehovah koa izy tany Dotana, araka ilay voaresaka terỳ am-piandohana. Fanindroany izy tamin’iny no nahita soavaly afo sy kalesy afo.
NATOKY AN’I JEHOVAH I ELISA
Tony foana i Elisa na dia voahodidin’ny fahavalo aza izy tany Dotana. Nahoana? Satria tena nino an’i Jehovah izy. Mila manana finoana matanjaka koa isika. Aoka àry isika hangataka fanahy masina amin’Andriamanitra, mba hananantsika finoana sy toetra hafa anisan’ny vokatry ny fanahy.—Lioka 11:13; Gal. 5:22, 23.
Hitan’i Elisa avy tamin’ilay zava-nitranga tany Dotana fa azo itokisana i Jehovah sy ny tafiny tsy hita maso. Takany fa naniraka anjely maro be Andriamanitra mba hanodidina an’ilay tanàna sy ireo nanao fahirano azy io. Nataon’Andriamanitra jamba ireo fahavalo, mba hamonjena an’i Elisa sy ilay mpanompony. (2 Mpanj. 6:17-23) Naneho finoana sy natoky tanteraka an’i Jehovah i Elisa tamin’io fotoan-tsarotra io sy tamin’ny fotoana hafa.
Aoka àry isika hatoky an’i Jehovah Andriamanitra, toa an’i Elisa. (Ohab. 3:5, 6) “Ho tsara fanahy amintsika sy hitahy antsika” izy, raha manao izany isika. (Sal. 67:1) Marina fa tsy voahodidina kalesy afo sy soavaly afo isika. Hiaro ny vahoakany eran-tany anefa i Jehovah, mandritra ny “fahoriana lehibe.” (Mat. 24:21; Apok. 7:9, 14) Mandra-pahatongan’izany, dia enga anie isika hitadidy foana fa “fialofantsika Andriamanitra.”—Sal. 62:8.
^ feh. 16 Tsy hoe niakatra tany amin’ny lanitra fonenan’i Jehovah sy ny anjely i Elia. Jereo Ny Tilikambo Fiambenana 15 Septambra 1997, pejy 15.
^ feh. 19 Jereo Ny Tilikambo Fiambenana 1 Aogositra 2005, pejy 10.
FANDRESENA FARAMPARANY TENY AMIN’NY FITSARANA
243 Isan’ny fandresena azon’ny Vavolombelon’i Jehovah teny amin’ny fitsarana avo, maneran-tany
Frantsa: Nandoa Ar 18 187 Tapitrisa Mahery
Tontalin’ny vola naloan’ny fanjakana frantsay tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah, tamin’ny 11 Desambra 2012, taorian’ny ady teny amin’ny fitsarana naharitra 15 taona
Gresy: Fitsarana Tampony
Niaiky ny Fitsarana Tampony, tamin’ny 2 Novambra 2012, fa manana zo hanana trano fivavahana ny Vavolombelon’i Jehovah, izay fivavahana kristianina fantatra hatraiza hatraiza
20 Fandresena azo teny amin’ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon’olombelona, nanomboka tamin’ny Aprily 2000
Korea Atsimo: Didy Navoakan’ny Komitin’ny Firenena Mikambana Miaro ny Zon’olombelona
25 Oktobra 2012: Tsy maintsy nandoa onitra tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah 388 i Korea Atsimo, satria nanitsakitsaka ny zon’izy ireo tsy hanao miaramila noho ny finoany
Hizara Hizara Mahita Kalesy Afo toa An’i Elisa ve Ianao?